चुनाव कुर्दै एकसय वर्षका वृद्ध - Everest Dainik - News from Nepal
चुनाव कुर्दै एकसय वर्षका वृद्ध
चुनावसम्म त कसाे नबाँचुला त ?
मोरङ, चैत २६ । मोरङ जिल्लाको पथरी शनिश्चरेका मानबहादुर भित्रिकोटी पछिल्लाे स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ८५ औं वसन्त पार गरेका थिए । अहिले उनी एक सय वर्ष पुगिसकेका छन् ।
यसअघि स्थानीय तहको चुनाव हुँदा हजुरबाले बोकेर लगेका ज्ञानेन्द्रबहादुर भित्रिकोटी २० वर्षका युवा अवस्थामा रहेका थिए ।
मतदानपछि त्यही वर्ष जन्मिएकाको उमेर पनि १८ वर्ष नाघिसकेको छ । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचन २०५४ सालमा भएको थियो । त्यसयता भएको छैन । जसले गर्दा आम नेपालीको मतदान गर्ने इच्छा र चाहना पूरा हुन सकेको छैन ।
मोरङ वयरवनकी दुक्कादेवी राजवंशी गएको स्थानीय निर्वाचनमा ६६ वर्ष पुगेकी छिन् । अहिले उनी ८५ वर्ष पार गर्दै अाएकी छिन् । यी त केही सामान्य उदाहरण हुन ।
२०५४ सालमा भर्खर जन्मिएका शिशु जवान भएका छन् । जवान वयस्क भएका छन्, भने वयस्क वृद्ध भएका छन् । लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा मतदान गर्नबाट धेरै वञ्चित भएका छन् ।
२००७ सालदेखिकै परिवर्तनलाई नजिकबाट हेरिरहेका मानबहादुर भित्रिकोटीले मतदान गर्ने तीव्र इच्छा व्यक्त गर्दै भनिन् , “वैशाख ३१ गतेसम्म त अब कसो नबाचौंला ? त्यहाँबाट पनि उता स¥यो भने चाही यसै भन्न सकिँदैन ।”
करिब दुई दशकपछि हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले मतदाता उत्साहित देखिएका छन् ।
सहर, बजार र ग्रामीण क्षेत्रका चिया पसलमासमेत यतिबेला कुराकानी गर्ने प्रमुख विषय नै स्थानीय तहको निर्वाचन बनेको छ । दलका नेता गाउँ पस्ने क्रम बाक्लिएको छ । आफ्नो महत्वपूर्ण अधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधि छान्ने सुनौलो अवसर गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उनीहरुमा छ ।
जनप्रतिनिधि नभएकै कारण गाउँको विकासले गति लिन नसकेको मोरङ सुन्दरदुलारीका युवा राजिव शर्माले बताए ।
एउटा सामान्य कामका लागि पनि सचिव खोज्दै सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताले सर्वसाधारण आक्रान्त भएको बताउँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको भएपनि एक महिनापछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरेर मात्रै जाने हो कि भन्ने सोचाई बनाएको छु भने ।